အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် လက်လျှော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် လက်လျှော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
epa06521031 Myanmar's State Counselor Aung San Suu Kyi holds speech duringaceremony for the singing ofaNationwide Ceasefire Agreement (NCA) at the Myanmar International Convention Center-2(MICC-2) in Naypyitaw, Myanmar, 13 February 2018. New Mon State Party (NMSP) and Lahu Democratic Union (LDU) singed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA). EPA-EFE/HEIN HTET
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် လက်လျှော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးပန်းတိုင် ဖက်ဒရယ် ခရီးက ချောချောမွေ့မွေ့ သာသာယာယာနဲ့ ဖြတ်သန်းရမှာ မဟုတ်ပေမယ့် လက်လျှော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နဲ့ လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး (LDU) တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးဟာ တာဝေးခရီး ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်နဲ့ ယုံကြည်မှုက အရင်းခံ ဖြစ်ပါတယ်၊ အခုထိလည်း နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်၊ လျှောက်လိုက် ရပ်လိုက်နဲ့ အကွေ့အကောက်တွေကလည်း များလှပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ စိတ်မပျက်ပါဘူးလို့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာနဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
အမြိုးသားပွနျလညျ သငျ့မွတျရေးအတှကျ လကျလြှော့မှာ မဟုတျဘူးလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ပွော
အမြိုးသားပွနျလညျ သငျ့မွတျရေးပနျးတိုငျ ဖကျဒရယျ ခရီးက ခြောခြောမှမှေ့ေ့ သာသာယာယာနဲ့ ဖွတျသနျးရမှာ မဟုတျပမေယျ့ လကျလြှော့မှာ မဟုတျဘူးလို့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောပါတယျ။
မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၃ ရကျ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ မှနျပွညျသဈပါတီ (NMSP) နဲ့ လားဟူဒီမိုကရကျတဈ အစညျးအရုံး (LDU) တို့ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျရေးထိုးတဲ့ အခမျးအနားမှာ ပွောသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
ငွိမျးခမျြးရေး ခရီးဟာ တာဝေးခရီး ဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျဓာတျနဲ့ ယုံကွညျမှုက အရငျးခံ ဖွဈပါတယျ၊ အခုထိလညျး နိမျ့လိုကျ မွငျ့လိုကျ၊ လြှောကျလိုကျ ရပျလိုကျနဲ့ အကှအေ့ကောကျတှကေလညျး မြားလှပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမတို့ စိတျမပကျြပါဘူးလို့ အမြိုးသားပွနျလညျ သငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဗဟိုဌာနဥက်ကဋ်ဌလညျး ဖွဈတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောပါတယျ။
Previous articleတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ NCA လက်မှတ် ရေးထိုးမှု ကြိုဆိုကြောင်း ထုတ်ပြန်
Next articleရိုက်တာ သတင်းထောက်တွေကို သတင်းရယူလို့ ဖမ်းဆီးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ပြော (ရုပ်/သံ)